10% Off (Without Set Menu)
10% Off (Without Set Menu) အသေးစိတျ
ပရိုမိုးရှငျး 96 Cafe
အစားသောက်ကောင်းကောင်းလေးတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Foddie လေးတွေအတွက် ဈေးကလည်းတန် အရသာလည်းမှာလည်းပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ ရန်ရှင်းလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ 96 Cafe ကို All Menu 10% (Without Set Menu) Promotions လေးနဲ့ဒိုးကြမယ်…
96 Cafe ဆိုင်လေးက တစ်ထပ်ဆိုင်လေးလို့ သာထင်ရပေမဲ့ တကယ်တော့ နှစ်ထပ်ဆိုင်၊ ရိုးရှင်းတဲ့ဆိုင်အပြင်ဆင်လေးဖြစ်တာကြောင့် သူငယ်ချင်းလေးတွေအတူစုပြီးဖြစ်ဖြစ် ၊ အတွဲလေးတွေဖြစ်ဖြစ် အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပါ…
Meals အတွက်တော့ Breakfast, Lunch, Dinner သုံးခုစလုံးရနိုင်ပီးတော့ ကောင်းမွန် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ အရသာလေးတွေကတော့ စားပြီးရင်း စားချင်နေတော့မှာ.. မင်မင်အာမခံတယ်…
96 Café မှာဆိုရင် စင်ကာပူနဲ့မလေးရှား Menu လေးတွေအဓိကရရှိနိုင်ပြီးတော့ အနောက်တိုင်းစားစရာတွေလည်းရနိုင်ပါတယ်။ Set Menu တွေအနေနဲ့ Breakfast နဲ့ Lunch Set လေးတွေလည်းရနိုင်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်အချိန်သွားသွား အဆင်ပြေတာပေါ့..
ဒီ Promotions တွေကို ရယူအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ B&F Weekly Promotions ရဲ့ Discount Coupon လေးတွေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ၊ Mobile App လေးနဲ့သွားရောက်အသုံးပြုပေးရမှာပါနော်….
96 Cafe ရဲ့ Promotions ကြီးကိုရယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ B&F Weekly Promotions Mobile App ရဲ့ 96 Cafe စာမျက်နှာက Use Now ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး ကျလာတဲ့ Success စာမျက်နှာကို Bill မရှင်းမီ ပြလိုက်ရုံနဲ့တင် Promotions ကြီးကို ခံစားနိုင်မှာပါ။ B&F Weekly Promotions ရဲ့ Coupon လေးတွေရှိရင်လည်း Coupon လေးနဲ့ Discount ရယူနိုင်ပါတယ်နော် …
96 Cafe ဆိုငျ
Lot 39/02,Shwe Ow Pin Housing,Yan Shing Street,Yan Kin TownshipYangon.
ဖုနျးနံပါတျ : 09770606996